(SAWIRRO) Qaban qaabada soo dhowaynta Farmaajo iyo madaxweyne Farmaajo oo diyaarad ciidan ah isagoo horumariyay Garowe. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Qaban qaabada soo dhowaynta Farmaajo iyo madaxweyne Farmaajo oo diyaarad ciidan ah isagoo horumariyay Garowe.
Garowe (Puntlandi) Qaban qaabada soo dhowaynta madaxweyne Farmaajo ayaa ka socota magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, iyadoo maanta la isugu tagay garoonka diyaaradaha Garowe halkaas oo madaxweynaha iyo wafdigiisa kasoo dagidoonaan.
Inkastoo madaxweyne Farmaajo uusan weli kasoo duulin magaalada Muqdisho, ayaa hadana wuxuu iskasoo horumariyay diyaarad ciidan ah oo maalintii shalay kasoo degtay garoonka Garowe, taasoo lagu sheegay inay ammaankiisa sugayaan, halka diyaarad kalena ay isaga soo raacidoonto.
Farmaajo ayaa xariga ka jaridoona garoonka cusub diyaaradaha Garowe, oo weli howshiisu qabyo tahay, dowladda federalkana looga fadhiyo inay kaalinteeda ka ciyaarto. Ciidanka Puntland ayaa si weyn u sugaya ammaanka wafuuda Xamar ka imaanaysa, waxaana garoonka lagu qabanayaa xaflad balaaaran oo xarig jaris ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa socdaalkiisa Garowe la filayaa inuu ku ekaado labo maalin, isagoo kadibna ugudbidoona dhinaca Gaalkacyo kadibna Galmudug iyo gobolada dhexe.